प्रिय रातो झन्डा
सहिदको रातो रगतले लतपतिएको गरिब, किसान र मजदुरका गहना स्वरुप हसिया हतौडा अंकित बैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादको रातो झण्डालाई झुकाउनु हुदैन । प्रिय रातो झन्डा तिमी झुकेको सुहाउँदै सुहाउँदैन । मालेमावादको सिद्धान्तलाई मजबुतसंग पकड्नुका साथै रातो झण्डालाई पनि पकड्नुपर्छ । […]
पहाडको बाहिरी पर्दामा परेको सेताम्मे बस्तुलाई हाम्रा नयनले हिउँ जस्तै देख्छौ । त्यो त एकछिनमा बिलाउने नक्कली हिउँ रहेछ । एकछिन घाम लाग्दा बिलाएर जाने चिज हाम्रो जिन्दगीको चर्को रापमा टिकाउन खोज्नु मुर्खता रहेछ । क्रान्तिको तातो मुस्लोमा जसरी कायरलाई […]
आमाप्रति ःरातो सलाम
इतिहास लेख्ने निर्माता म कसरी व्याख्या गरुँ आज म तिम्रो बारेमा “आमा“ भन्दा माथि ठुलो कुनै जाति देखिन मेरो दृष्टिकोणमा लेखिएको छैन त्यो शब्दकोषमा त्यसैले आमा तिमी जीवन र जगतको सृष्टिकर्ता हौ । छाडिदिनुस् ती वीर पुरुषका कुरा इतिहास […]
हलो बोक्दै थलो तिर गए थलो खोसिएको थाहा भएन बाबालाई अब थलो खोसिएको हलोको के काम ? “इच्छा ”छन् त थियो नि ! सपनाका बीउ छरेर रहरका बालाहरु झुलाउने मिठासका दाना फलाउने अपसोच ! दलाली युगमा स्वाद अर्कैले चाक्छ भने […]
अन्तीम पटक जनताले सघाउनु पर्छ
देशको चिन्ता हुनेहरुलाई जगाउनुपर्छ । भ्रष्ट, राष्ट्रघातिहरुलाई भगाउनुपर्छ । वलात्कारी, दलाल र तष्करहरुलाई । अव नेल र हत्कडी लगाउनु पर्छ । क्रान्तिकारी, देशभक्त राष्ट्रवादीहरुलाई । अन्तीम पटक जनताले सघाउनु पर्छ । मानव रगत चुस्ने उडुस, उपियाँलाई । नष्ट गर्ने विषादी […]
खोक्रो राष्ट्रवाद सबैले बुझ्दैछन
स्यालहरूले किन ? बाख्रा खोज्दैछन । बाँदरहरूले किन ? मकै लुछ्दैछन । घर भित्रका उडुस र उपियाँहरूले तानी तानी किन ? रगत चुस्दैछन । अझै बाघ, भालु र चितुवाहरू दक्षिण बाट किन ? उत्तर घुस्दैछन । ए ! गोर्खाली […]
क्रान्तिले तिब्रगति लिदैगर्दा बलिदानको उचाई पनि बढ्दै जान्छ । त्यति मात्र हैन प्रतिक्रियावादीहरु झन बर्बराउने गर्दछन । यतिबेलाको सन्धर्भ यसै प्रवृत्ति संग मेल खान्छ । जब एकिकृत जनक्रान्तिले आफ्नो बिकास तिब्र गतिमा गर्यो, अनि कम्युनिष्ट नामधारीको कथित दुईतिहाईको सरकार तिलमिलाएर […]
दोहोरो भिडन्तमा किन कहिल्यै पनि मर्दैन सरकार सँधैं किन नागरिकहरू मात्र मर्छन बा ? एका बिहानै छोरीले सोधिन् म के उत्तर दिने भनेर विचलित छु । दोहोरो भिडन्त उहिल्यै पनि भयो सुखानीमा त्यहाँ पनि सरकार मरेन मात्र नागरिकहरू […]